बौद्दिकहरूको बुझाइमा भ्रम छैन, माओवादीहरूको एजेण्डा प्रष्ट छ । संविधानको माओवादी मस्यौदाले राष्ट्रपतिले सर्वोच्च न्यायलयका जजहरू नियुक्ति गर्नेदेखि कार्यपालिकाका मातहतमा न्यायालयलाई राक्नु पर्छ भन्ने कुरा ढुंग्रो नलुकाइ खुस्काएको छ । अब यस्तो लोकतन्त्र नै चाहिएको हो भने , मलाई यो मुलुकमा मेरा सन्ततिको भविष्य गोचर हुँदैन । न्यायालायले फैसला आफ्नो पक्षमा फैसला गरेन भने 'जनताले' प्रतिरोध गर्छन भन्दै ब्यारेकमा सरकारी दानपानीमा हसुरेर डकार काढेर बसेका 'जन्तु'लाई सडकमा उतारेर नारावाजी र हिंसा गर्यो । यस्तो 'तन्तर' तर्फ जाँदेछौँ हामी क्रमश: ।
धेरै पढ्यो भने दिमाग खुस्किन्छ भन्थे, यी डा. साहेवको कुरा सुन्दा हो कि क्या हो जस्तो लाग्छ। यिनी अर्का मात्रिका बन्न लागिरहेकाछन्। सरकारी साधनस्रोतको प्रयोग गरेर नानाथरिका अनुत्पादक कार्यक्रमहरुमा मनलाग्दी भाषण ठोक्दै हिंड्छन्। आठ-आठ जना जर्नेलहरुलाई एकमूष्ठ अवकाश दिने निर्णय गर्दा सत्ता साझेदार अन्य दलहरुसंग सल्लाह नगर्ने, पूर्व नजीरहरू कस्तो छ अध्ययन नगर्ने, प्रधान सेनापतिसंग नै छलफल नगर्ने, कानूनी अडचनहरु के हुन सक्छन् भनेर नबुझ्ने अनि अदालतले हराईदियो भनेर न्यायालयकै बद्ख्वाँई गर्दै हिंडने यस्तो जंगली पारा सत्ताधारी प्रमुख दलको नेता मंत्रीलाई लाज लाग्न पर्ने हो। माओबादीले गरेको काममा सहमत भए लोकतन्त्र सुरक्षित, होईन भने लोकतन्त्र खतरामा, डाक्टर साहेवले प्रतिपादित सिद्दान्त हो कि क्या हो?
न्यायलय त स्बतन्त्र हुनुपर्छ ।
"न्यायलय सबै भन्दा माथि रहे लोकतन्त्र खतरामा पर्ने --"
खोइ ! कुरा बुझ्न् सकिएन कत्ती पनि ।
" न्याय नपाए गोर्खा जानु " भन्ने उु बेलाको उक्तिमा पनि न्यायलय लाई कती महत्ब दिएर हेरिएको छ र न्यायलय को कती महत्ब छ भन्ने हामी बुझ्न् सक्छ ।
सरकार ले न्यायलय मा बिश्बास गर्न नसकेर यस्तो भन्नु भो कि बाबुराम जि ले । यदी यसो हो भने त झनै बर्बाद हुने भो किनकी मुलुक मा सरकार भन्ने कुरा त पार्टी अनुसार फेरी नै रहन्छन । अब हरेक पटक पार्टी का सरकार आउँदा तिनै पार्टिका सरकार को मातहत मा रहेर न्यायलय चल्दा साच्चै जनताले स ही न्याय पाउलान त !
न्यायलय स्बतन्त्र हुनु पर्छ र बलियो पनि हुनु पर्छ आफ्नो स्बतन्त्रतामा ।